8Yar (အိပ်ယာ): အိမ်ရှာပုံတော်
Posted by 8Yar at 4:21 pm
အိမ်တွေ့မှပဲ စာအသစ်တက်တော့တာပဲ .. :P
နေကောင်း ကျန်းမာ အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာမိပါကြောင်း .. :D
အိမ်ရှာတွေ့ပြီဆိုတော့ ၀မ်းသာလှကြောင်းပါ ကို8ရာ ခင်ဗျား
ဟိဟိ.. အိမ်ရသွားပြီလား.. တော်သေးတာပေါ့.. မဟုတ်ရင် အိပ်ယာတစ်ယောက် လမ်းမပေါ်ရောက်နေဦးမယ် :P
သြော် မောင်အိပ်ယာပိန်းချက် ငါခုမှသိတယ်း)
မောင်8Yar တစ်ယောက် ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ အိမ်ခန်းရှာတွေ့ပြီဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။ နောက်ထပ်တက်လာမဲ့ ပို့စ်တွေ တီတင့်တို့တစ်တွေ ဖတ်ခွင့်ရပြီပေါ့နော်း)အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်?
အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ကို Xယာ.
အိပ်ရာ ကအိပ်စရာရသွားပြီပေါ့နော်..အိမ်း..လာလည်ရင် အိမ်လိုက်ရှာကြည့်ပါတယ်..ထန်းလက်နဲ့လုပ်တဲ့ ထန်းတောထဲကအိမ်
မတွေ့ လို့မြန်မာပြည်မှာပဲ နေတော့မယ်...တိန်
စလုံးလာလို့ အိမ်ရှာမယ်ဆို ဒီပို့စ်က အသုံးဝင်တယ်ဗျို့...
ကို အိပ်ယာ အဆင်ပြေပြီဆိုတော့ ၀မ်းသာတယ်ဗျာ
အိပ်ယာက အိပ်စရာ ရှာနေတယ်ဆိုပါလား.. အရင်လိုပဲ ဆရာ့တော်ကျောင်း သွားနေ ရနေတာကို.. :D
မိုးခါး<< ဟီး... :P ဟုတ်။ လာအားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ အစ်မမိုးခါးရေ။
AH<< ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါအစ်ကိုရေ။ ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။
Candy<< ဟာဟ လမ်းမပေါ်ရောက်လို့ကတော့ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်ထောင်ပြီး ဥက္ကဌလုပ်ပစ်လိုက်မယ်။ :P
မဒမ်ကိုး<<ဟုတ်တယ်ဗျာ။ ကိုယ့်ဟာကိုလဲ အားမရပါဘူးဗျာ။ ပိန်းချက်က လက်ဖက်ရေသောက်ပါအုံးလားဆိုရင် ထမင်းစားလို့မရဘူးလားလို့ မေးတတ်တဲ့လူဗျ။ :P
သမံစီး<<လုပ်ချင်တာပေါ့ သမံစီးရယ်။ စပွန်ဆာရှိမယ်ဆိုရင် အဲလေ... သမံစီး လာမယ်ဆို လုပ်မယ်ဂျာ။ :D
mstint<< ဟီးဟီး အန်တီတင့်ရေ လာမြှောက်ပြီးပြောသွားလို့ ကျေးကျေးပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်လဲ ကိုယ့်အကြောင်းကို အသိဆုံးမို့ ဘဝင်မမြင့်ရဲပါဘူး။ အားလုံးလည်းဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ။ အန်တီတင့်လဲ စိတ်ဓာတ်အစဉ်ကြည်လင်အေးမြပါစေခင်ဗျာ။
KO2<< ကျေးဇူးပါအစ်ကိုရေ။ ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း)<< ဟီးဟီး အခုလယ်တွေလိုက် သိမ်းနေတယ်လို့ကြားတော့ အစ်ကိုမောင်ကို စိတ်ပူမိတယ်ဗျာ။ ခစ်ခစ် ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။
ကိုရင်<< ဆရာတော်ကမိန့်တယ် ဒီကောင်အိပ်ယာ ဆွန်းခံလိုက်ဆိုတော့ ဆွန်းခံရင်း ငှက်သင့်မှာကြောက်တယ်ပြော၊ ဆွန်းချက်ဆိုတော့ ဆွန်းဆန်ထဲ ကြက်ချေးရောတယ် ပြောခံရမှာကြောက်တယ်ပြောတယ်။ ဒီကောင်ကိုဘယ်မှာ သုံးလို့ရလဲပြော ဆိုပြီး စိတ်ဆိုးနေလို့ ကျောင်းမပြန်ရဲတာနဲ့ အိမ်ရှာရတာပါဗျာ။ :P
ခင်ခင်မင်မင် ma ma jasmine
အိမ်တွေ့ပြီဆိုတော့ အိပ်ယာတစ်ယောက် အိပ်ယာပေါ်ပြန်ရောက်ပြီပေါ့...အင်း အိမ်ရှာရတဲ့ ဒုက္ခကလည်း တယ်မသေးပေဘူး...သူရို့ဆီမှာမို့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေရှာလို့ရတာ...ရွှေပြည်မှာတော့ တစ်နေကုန်တစ်နေခမ်း လှည့်ပတ်ပြီးရှာပေတော့...
jasmine(တောင်ကြီး)<< ဟာဂျာ... မွှားရေးတာကို အတည်ယူရဘူးလေဂျာ။ တစ်အိမ်လုံးငှါးတာမဟုတ်တော့ အိမ်တက်လုပ်လို့ ရမရမသိဘူးဗျ။ :D
ဟန်ကြည်<< ဟုတ်တယ်ခင်ဗျ အိမ်ရှာရတာ တကယ်မလွယ်တဲ့ အရာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ရွှေပြည်ကြီး အမြန်တိုးတက်ဖို့ ဆုတော့တောင်းနေရတာပဲဗျာ။ လာအားပေးလို့ကျေးဇူးပါ အစ်ကိုကြီးရေ။
စလုံးမှာ အိမ်ရှာရတဲ့ ဒုက္ခကလဲမသေးဘူးနော်... အဲလိုမျိုးကအစပဲရှိပါသေးတယ် ယာယာရေ ....
ပူးပူးတို့ ဆို အရေခွံထူနေပီ...... ပူးပူးတိုလဲ အိမ်ခန်းရှာရအုံးမှာ
ခင်မင်လျက် ပါ......... ပူးပူး :)
ဖတ်ရသူတောင် ပျော်လာတယ်... :)
puupuu<< ဟုတ်တယ်ဗျာ စလုံးမှာ အိမ်ရှာရတာ အတော်မလွယ်တဲ့ ကိစ္စပါဗျာ။ ပူးပူးလဲ အိမ်ကောင်းကောင်းလေးရပါစေလို့ 8Yarဆုတောင်းပေးပါတယ်။
shwewunyatana<< တင်ပါ့ဘုရား။ ကျေးဇူးပါ အရှင်ဘုရား။ အရှင်ဘုရားလည်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ ခင်ဗျာ။
မြသွေးနီ<< ဟီး.... ဟုတ်ကဲ့အစ်မ လာအားပေးလို့ ကျေးကျေးပါအစ်မမြသွေးနီရေ။
သူများဆီမှာ အိမ်ရှာပုံတော်ဖွင့်ရတာ မလွယ်ဘူးနော်.
အိပ်ရာတဲ့ ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဆန်းတယ် :)